Bọchị mbụ nke afọ 2017 na ebe a ka anyị hapụụrụ gị izu kachasị mma na izu na Soy de Mac | Esi m mac
Jenụwarị 1, 2017 abataworị na anyị chọrọ ịmalite afọ dịka anyị mechara ya awa ole na ole gara aga, na-achọ ka unu niile ndị na-agụ anyị afọ ọ bụla ka mma kwa ụbọchị karịa oge gara aga na ebe ebum n’uche unu, ebum n’uche na ebum n’uche unu. N'isiokwu mbụ a na "nke kacha mma n'izu ahụ" anyị ga-ahụ akụkọ kacha pụta ìhè nke afọ gara aga na nke ahụ bụ ugbu a anyị enweela otu afọ zuru ezu n'ihu nke anyị na-atụ anya ọtụtụ akụkọ na-atọ ụtọ banyere ụlọ ọrụ Cupertino , ebe anyi ga ekerita ezigbo aka nke nkuzi na uzo Mac.
Mana na nke a, anyị ga-ahụ ihe bụ akụkọ kachasị pụtara iche n'izu gara aga nke 2016 ma ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na anyị ahụbeghị nnukwu ije, anyị nwere ụfọdụ akụkọ na-atọ ụtọ anyị chọrọ igosi. Nke mbu bu na Apple ga-emekọwanye ọnụ na Akụkọ Ndị Ahịa, ebe ewepu ihe ohuru MacBook Pros site na aro ha. Ozi a bụ akụkọ n'ihi na ndị si na Cupertino anaghị abụkarị ma ọ bụ jiri ụdị okwu a na mmekorita ọ bụla. Apple na-ewe obere oge na-azaghachi ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ mgbe ị na-eme akụkọ banyere ha na nke a bụ ihe a na-apụghị ichetụ n'echiche afọ ole na ole gara aga.
Ozi nke abụọ ma ọ bụ kama vidiyo, metụtara ya Ogige Apple 2. Ogige 2 ọhụrụ a egbu oge ka emechara ọ bụ ezie na anyị niile chere na ha ga-abịa n'oge site na ikiri vidiyo kwa ọnwa nke drones na-efegharị na mpaghara ahụ. Ọ dị ka ọ dị Nke a agaghị enwe ike ịmeghe ruo afọ ọhụrụ nke anyị bidoro taa.
Na nke a anyị kerịta ikpeazụ aghụghọ ma ọ bụ nkuzi si afọ gara aga na ọ bụ otú ike a ohere na anyị n'ọdụ ụgbọ mmiri. Emere nke a site na Terminal ma ọ dị mfe ịme ọ bụrụ na anyị soro ntuziaka na nkuzi ahụ.
MacBook Pro 2016 Batrị na Touch Ogwe Ọ bụ n’egbugbere ọnụ nke onye ọ bụla zụtara kọmputa ọhụrụ Apple a. Oge a ka anyị chọrọ ka ị kọọ ahụmịhe gị na ndụ batrị N'isiokwu a.
N'ikpeazụ, anyị chọrọ ịdekọ okwu onye isi nke Apple mgbe ọ bụ "onye njem" na New York Stock Exchange na ebe ọ kwadoro ihe ọtụtụ n'ime anyị maralarị, ndị AirPod nwere "ihe ịga nke ọma"n'ahịa. Ugbu a, anyị kwesịrị ịhụ ọnụ ọgụgụ ahụ n'ezie, mana o yiri doro anya na ọtụtụ na ndị ọrụ anaghị akwụsị ikwu banyere ha.
Ruo ugbu a na mkpokọta nke ụfọdụ dị ịrịba ama izu ikpeazụ nke 2016 na m si Mac, Mee afọ 2017 ga-abụ afọ pụrụ iche maka mmadụ niile.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Daybọchị mbụ nke afọ 2017 na ebe a ka anyị hapụụrụ gị izu kachasị mma na m sitere na Mac
Lọ 40: Advanced encryption Free Software maka obere oge